अनुहारको दाग-धब्बाका कारण लज्जित हुनु परेको छ ? यसरी गर्नुहोस् आफ्नो घरमै, पाइने तुलसीको प्रयोग – News Nepali Dainik
अनुहारको दाग-धब्बाका कारण लज्जित हुनु परेको छ ? यसरी गर्नुहोस् आफ्नो घरमै, पाइने तुलसीको प्रयोग
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: १४:१५:२९
तुलसी यस्तो औषधि हो जसले छालामा आउने जुनसुकै समस्यामाबाट छुटकारा दिन्छ ।
यसका साथै, हरेक तुलसीको पातको सेवनले शरीरमा हुने रुघाखोकी, इन्फेक्शन जस्ता समस्याबाट बचाउँछ । तुलसीको पात हरेक दिन अनुहारमा लगाउँदा अनुहारमा हुने दागधब्बाबाट पनि बचाउँछ ।
आलुमा यो चिज मिलाएर अनुहारमा लगाउनुहोस्, गाएब हुन्छन् दागधब्बा, बढ्नेछ…
एक चम्चा तुलसीको पातको पेष्टमा एक चम्चा मह मिसाउने । यसको पेष्ट अनुहारमा लगाउने र त्यसलाई १५ मिनेटपछि पखारल्ने । यसले अनुहारलाई सफा बनाउँछ ।
Last Updated on: February 6th, 2021 at 2:15 pm